Wargeysyadda dalka Norway oo xishooday | WWW.SOMALILAND.NO
80 år gammel bestemor blant Toronto-ofrene
Kvotering løser ikke alt
Onsdag faller dommen i ubåtsaken
Dårligste vinhøsten på 60 år i Frankrike – store fall også i Italia og Spania
Wargeysyadda dalka Norway oo xishooday
Posted on Febraayo 13, 2008 by weriye1
Oslo (www.somaliland.no)Wargeysyadda dalka Norway ugu waaweyn ayaa sheegay in aanay daabici doonin sawirada lagu aflagaadeynayey Nabiga (nnk). Waxaa arintaa maanta ku dhaqaaqey jaraaidada dalka Danmark oo sheegay in ay u daabeceen si ay ugu hiiliyaan ninkii sawiradaa sameeyey oo dhawaan dad lagu tuhunsanyahay in ay doonayaan in ay dilaan la qabqabtay.
Arintan ayaa dhowr sanno ka hor cirka isku shareertay kadib daandaansigani ka cadhaysiiyey dad badan oo muslimiin ah oo dunidda dacaladeeda ku kala nool. Dadka u dooda in arintan la sameeyo ayaa badanka ku andacooda xuriyattul-qawlka, halka kuwa ka soo horjeedaana ay arintan ku tilmaamaan daandaansi looga dan leeyahay in lagu tijaabiyo xadka umadda muslimiinta ah.
Dalka Norway waxaa hore sawiradaa aflagaadadda ah u daabacay wargeyska yar ee kiristanka ah ee magaciisa la yidhaa “Magazinet”. Ninka tafatiraha ka ah wargeyskan ayaa sheegay in aanu ku tala jirin uu daabaco doorkan, laakiin uu taageerayo cidii kale ee daabacda. Ilaa iyo imika waxaa jirta jaraaid ka soo baxa koonfurta dalka Norway oo magaciisa la yidhaa “Agderposten” oo horena u daabacay imikana sheegay in uu ku celin doona.
Xooghayaha guud ee ururka daladda u ah ururadda muslimiinta ee Norway (IRN) Shoib Sultan ayaa sheegay in uu aad uga xunyahay arintaa ay jaraaidkaasu ku dhaqaaqeen, laakiin sidoo kale uu dhaleecaynayo cidii qas iyo jahawareer ugu jawaabta.
Ilaa iyo imika arintani si aad ah umay gaadhin dunidda muslimka, sidaa daraadeed wax dareen ah lagama hayo. Laakiin waxaa laga cabsi qabaa in taasu dhacdo maalinta jimcaha ee muslimiintu ciidaan.
Filed under: Diinta, Norge, Norway, Warka |
« Ciidamada Qaranka Somaliand oo xoog ku soo furtay ninkii Jarmalka ahaa Warsaxaafadeed uu qabtay Daniel Bronkal oo ah hawlwadeenkii hay’ada GAA ee la soo badbaadiyey »